ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: January 2009
ဒီအဟောလေးက ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာ ကိုယ့်ကံကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်တာမျိုးပါ။
သိချင်တဲ့နှစ်ကို ကြိုတွက်လို့ရသလို ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကိုလဲတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဒီအဟောလေးကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်တုန်းက စာအုပ်တစ်အုပ်ကနေဖတ်မိပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ကူးရေးထားမိပါတယ်။ စာအုပ်နာမည်မမှတ်မိတော့တဲ့အပြင် မူရင်းရေးသားသူဘယ်သူမှန်းလဲ မှတ်မထားမိလိုက်ပါဘူးရှင်။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ ယူဆလို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းများကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
တွက်ချက်ပုံက ဒီလိုပါ ….
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ မွေးရက်၊ မွေးလ နဲ့ သိချင်တဲ့နှစ်ကို ချရေးပြီး ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်ပါ။ ဥပမာ ……
မွေးရက် + မွေးလ + သိလိုသောနှစ်
၂၄ + ၇ + ၂၀၀၉
(၂+၄) + ၇ + (၂+၀+၀+၉)
၆ + ၇ + ၁၁ = ၂၄
ရလာတဲ့အဖြေ ၂၄ ကိုလည်း ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပါ ….
၂ + ၄ = ၆ ….
ဒါဆိုရင် ၆ ဂဏန်းအတွက်အဟောကို သွားဖတ်ရမှာပါ …. သူငယ်ချင်းတို့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁ ဂဏန်း။ ။ ထူးခြားသောတက်လမ်းရှိမည်။ အပြောင်းအလဲရှိမည်။ လုပ်ငန်းသစ်အောင်မြင်မည်။ တစ်ကြိမ်မှမလုပ်ဖူးသေးသည်များလုပ်ကိုင်အောင်မြင်မည်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအပြောင်းအလဲရှိမည်။ ဘ၀အတွက်အရေးပါသော ခြေလှမ်းများစတင်ရမည်။ အိမ်ဆောက်၊အိမ်ပြင်ခြင်းရှိမည်။ အဟောင်းရပ်၍အသစ်စတင်မည်။
၂ ဂဏန်း။ ။ ခရီးနှင့်ပတ်သတ်သောကံကောင်းသည်။ လူမျိုးကွဲ၊လူမျိုးခြား အကျိုးပေးသည်။ ချစ်သူ၊ခင်သူ၊ သံယောဇဉ်ရှိသူများနှင့် ခေတ္တခွဲရကိန်းရှိသည်။ အိမ်တွင်းရေးညံ့သည်။ ရန်အတိုက်အခံကြားမှတိုးတက်မည်။ ကြန့်ကြာနေသောရပိုင်ခွင့်များပြန်လည်ရရှိမည်။ ပြည်ပခရီးကြံစည်ပေါ်ပေါက်အောင်မြင်မည်။
၃ ဂဏန်း။ ။ အထူးကောင်းသည်။ ရည်မှန်းထားသည်များ အောင်မြင်မည်။ ပြန့်ကျဲနေသောစီးပွားများ စုစည်းမိမည်။ စိတ်ရှုပ်စရာများကင်းစင်သည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်းလုပ်၍ကောင်းသည်။၀င်ငွေတိုး ရာထူးတိုးမည်။ ပညာရေးအထူးကောင်းသည်။ ငွေကြေးကံကောင်းသည်။
၄ ဂဏန်း။ ။ အလွန်ငွေကုန်များသည်။ မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲအလုပ်ပို၊ ကိစ္စပိုများကြုံမည်။ စိတ်ပင်ပန်းပြီး အောင်မြင်မည်။ ယှဉ်ပြိုင်၍ အနိုင်ရမည်။ ပညာ၊သင်တန်းနှင်ပတ်သတ်သော ကိစ္စများကြုံမည်။ ထူးခြားသောတိုးတက်မှုများရမည်။ ငွေစုဆောင်းရန်ခက်မည်။ နာမည်ကျော်ကြားမည်။
၅ ဂဏန်း။ ။ အလွန်စိတ်ရှုပ်ရမည်။ စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်မည်။ လူယုံဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်တွင်းရေး၊ မေတ္တာရေးတွင်အညံ့ရှိသည်။ ငွေကြေးကိစ္စ၊လူမှုရေးကိစ္စအညံ့ရှိသည်။ အမှုပြဿနာများတတ်သည်။ အထင်လွဲခံရခြင်းများကြုံမည်။
၆ ဂဏန်း။ ။ အထူးကောင်းသောအနေအထားရှိသည်။ လိုလားချက်များ အောင်မြင်မည်။ မေတ္တာရေးကောင်းမည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်း၊ မိသားစုတွင်၎င်း အလှုမင်္ဂလာကိစ္စများကြုံမည်။ စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်သော ကိစ္စများမှ အောင်မြင်မှုကောင်းစွားရနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိသည်။ မိတ်ကောင်း၊ဆွေကောင်း၊ အကြီးအကဲ အကူအညီရတတ်သည်။
၇ ဂဏန်း။ ။ ထူးခြားသောအပြောင်းအလဲနှင့် တက်လမ်းပေါ်ပေါက်မည်။ လူမျိုးကွဲ၊ ကပြားများ အကျိုးပေးသည်။ နေရာအပြောင်းအလဲနှင့်တက်လမ်းပွင့်မည်။ ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းကိစ္စများ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်၍ကောင်းသောအနေအထားရှိမည်။ လိမ်ညာခံရမည်။ ပြည်ပခရီးကံအထူးကောင်း၏။ မိဘ အကြီးအကဲ ကျန်းမာရေးညံ့သည်။ ခြံ၊ကား၊အခန်း အဟောင်းထွက်၍ အသစ်ဝင်မည်။
၈ ဂဏန်း။ ။ အထူးကောင်းသည်။ စိတ်ပျော်ရွှင်ရမည်။ ရည်မှန်းထားသည်များ စနစ်တကျလုပ်၍တိုးတက်မည်။ လုပ်အားကြောင့်သာမက ကံကြောင့်ငွေဝင်မည်။ ဘက်စုံကောင်းမည်။ လိုလားချက်များပြည့်စုံမည်။ ထူးခြားသောတိုးတက်မှုများ သေချာပေါက်ရမည်။ ထီပေါက်ငွေရမည်။ အိမ်တွင်းရေးညံ့သည်။ ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအောင်မြင်မည်။
၉ ဂဏန်း။ ။ အညံ့ရှိသည်။ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်နေသောလုပ်ငန်းများရပ်တန့်မည်။ လမ်ကြောင်းဟောင်းရပ်၍ လမ်းသစ်ပေါ်သောအနေအထားရှိမည်။ ငွေကြေးကံ၊ လုပ်ငန်းကံ အနှောက်အယှက်ရှိမည်။ စိတ်ရှုပ်စရာများ တခုပြီးတခုပေါ်မည်။ မှန်းထားသည်နှင့်လက်တွေ့ကွာခြားသော အခြေအနေရှိမည်။ ခက်ခဲသောပြဿနာများထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အရှုံးပေါ် ငွေကုန် စိတ်ရှုပ်ရမည်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 12:05 AM 8 comments Links to this post
အပျင်းလဲပြေ ပျော်စရာလဲကောင်း …
မနေနိုင်လို့ ပို့စ်တစ်ခုတင်မိပြန်ပြီ ... ဒီပို့စ်ပြီးရင်တော့တကယ်ကြီးကိုခွင့်ယူမှာပါ .... :P
ကျွန်မဆီကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ဖော်ဝဒ်မေးလ်လေးတစ်စောင်ဝင်လာပါတယ်။ အပျင်းလဲပြေ၊ ပျော်စရာလဲကောင်း၊ စိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်းတဲ့ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေလေးတွေပါ။
ဒီအမေးအဖြေလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တုန်းက အလင်းတန်းဂျာနယ်မှာ စာရေးဆရာ အတ္တကျော် ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ အပျင်းပြေ(၂) ဆိုတဲ့ အမေးအဖြေလေးပါတဲ့။ လူ့စိတ်ကို စနစ်တကျစမ်းသပ်တာတစ်မျိုးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အရေးကြီးတာက ညွှန်ကြားချက်တွေကို တသဝေမတိမ်းလိုက်နာဖို့ပါပဲ။ ညွှန်ကြားချက်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့လှည့်ဖြားမယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှာမဟုတ်သလို နောက်ဆုံးကျရင်လှည့်ဖျားမိခဲ့တဲ့အတွက်နောင်တရနေမှာလည်း အသေအချာပါပဲတဲ့။ ကျွန်မဖြေကြည့်တာတော့ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင်တိုက်ဆိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကဲ … သူငယ်ချင်းတို့ရေ မလိမ်၊မညာပဲနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ …
ပထမဆုံး စက္ကူအလွတ်တစ်ရွက်နဲ့ရေးစရာတစ်ခုခုယူလိုက်ပါ။ သတိထားရမှာက လူနာမည်တွေကိုရေးတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့တကယ်သိကျွမ်းနေတဲ့သူ၊ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုသာရွေးပါ။ ပြီးတော့စိတ်ထဲ ဖျိုးကနဲ၊ ဖျက်ကနဲ့ ပထဆုံးပေါ်လာတာတွေကိုသာ ချရေးပါနော်။ လုံးဝကျော်မဖတ်ပဲနဲ့ တစ်လိုင်းချင်းဖြေးဖြေးချင်း ဖတ်ရင်းဖြေသွားပါနော်။
(က) ရှေးဦးစွာ ၁ မှ ၁၁ အထိကို အထက်မှအောက် တန်းစီပြီး ချရေးလိုက်ပါ။
(ခ) ပြီးရင် နံပါတ်(၁)ဘေးမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါ။
(ဂ) ပြီးရင် နံပါတ်(၂)ဘေးမှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါ။
(ဃ) နံပါတ်(၃) နှင့် (၇) ဘေးမှာအနီးစပ်ဆုံးဆန့်ကျင်ဘက်များရဲ့နာမည်များချရေးပါ။
(ဖြေသူက ယောက်ျားဆိုရင် မိန်းမနှစ်ယောက်နာမည်၊ ဖြေသူကမိန်းမဆိုရင် ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ပေါ့)
(င) နံပါတ်(၄)၊(၅)၊(၆) ဘေးမှာမိသားစုထဲကဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းထဲကဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့နာမည်သုံးခုကိုချရေးလိုက်ပါဦး။
သတိပေးချင်ပါသေးတယ်။ မလိမ်နဲ့ မညာနဲ့နော် လိမ်ညာမိရင် နောင်တရနေလိမ့်မယ်။
(စ) သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးခုကို နံပါတ်(၈)၊(၉)၊(၁၀) နှင့် (၁၁)ဘေးမှာချရေးလိုက်ပါ။
(စဉ်းစားရတော့ခက်မယ်ထင်တယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်မသိလဲ သီချင်းစာပိုဒ်လေးသာခံစားမိသလို ဖျက်ကနဲပေါ်တာတွေသာချရေးလိုက်နော်)
(ဆ) အားလုံးပြီးသွားပြီနော် … လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။
အားလုံးသေချာပြီဆိုရင်တော့ အဖြေတွေကို ကြည့်လိုက်တော့နော် ….
နံပါတ်(၁)မှာ သင်ရေးထားတဲ့ဂဏန်းအတိုင်း(လူအရေအတွက်) စေ့အောင် နံပါတ်(၂)မှာ သင်ရေးထားတဲ့ ဂဏန်းအတိုင်း(ရက်အတွင်း) ပြောလိုက်ပါ။ ဒါဆို ဆုတောင်းတွေမကြာခင်ပြည့်လာပါလိမ့်မယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ စာရေးသူပြောတာနော်။ ပြည့်မပြည့်တော့မသိဘူး။)
(ဥပမာ - နံပါတ်(၁)မှာ ၃ ရေးပြီး နံပါတ်(၂)မှာ ၅ ရေးတယ်ဆိုပါစို့ … သင်က ၅ ရက်အတွင်း လူ ၃ ယောက်ကိုအသိပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ)
အဖြေလေးတွေဖတ်ပြီး တိုက်ဆိုင်မှု့လေးတွေကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား ….
နံပါတ်(၇)ဘေးမှာရေးထားတဲ့သူကတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူ။ ကိုယ်နဲ့သိပ်တော့လည်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့သူပါတဲ့။
နံပါတ်(၄)ဘေးမှာရေးထားတဲ့သူကိုကျတော့ ကိုယ်က ဂရုအစိုက်မိဆုံး၊အလေးပေးမိဆုံးပါတဲ့။
ကဲ … သူငယ်ချင်းတို့ရေ … အပျင်းလဲပြေ၊ပျော်စရာလဲကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:51 PM6comments Links to this post
မနက်ဖြန်ကစပြီး ဘလော့ကနေ ခဏခွင့်ယူမယ်နော် ...
ရန်ကုန်ခဏပြန်မလို့လေ .... ကျိုက်ထီးရိုးလဲသွားဖြစ်မယ်ထင်တယ် ...
ရန်ကုန်ပြန်မှာတွေးပြီးပျော်နေတော့ အလုပ်ထဲလည်းစိတ်ကမပါဘူး ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:40 PM7comments Links to this post
(Image from http://i51.photobucket.com)
တက္ကသိုလ်ကို ဒေးတက်ကြသူတွေကလဲ ဒေးအမှတ်တရတွေရှိကြသလို၊ အဝေးသင်တက်သူတွေကလဲ အဝေးသင်ရဲ့ အမှတ်တရတွေရှိကြမှာပါ …ကျွန်မက အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ဆိုတော့ ကျောင်းသားဘ၀ထက်၊ ၀န်ထမ်းဘ၀မှာ ပိုအနေကြာခဲ့ပါတယ် … အဲ့ဒီတော့ အလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေကို ပိုပြီး သံယောဇဉ်တွယ်မိတယ်ပေါ့ရှင် … လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာမှ ဂိမ်းဆော့ဖော်၊ ဆော့ဖက်တွေကို ပိုပြီးအခင်အမင်ပိုခဲ့ပါတယ် ….
ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကုပ္မဏီတစ်ခုမှာ(၅)နှစ်ကြာအောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်….
အဲ့ဒီကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတော်တော်များများက ဂိမ်းဆော့တာ အတော်လေးဝါသနာပါကြပါတယ် .. ကျွန်မတို့ရဲ့ စီနီယာတွေကတော့ Star Craft ကိုအသေအလဲဆော့ကြတာပေါ့ရှင် …
ဂျူနီယာတွေကတော့ ဘာဂိမ်းတွေဆော့ကြသလဲဆိုရင် …. Age Of Empire II ဆိုတဲ့ စစ်တိုက်တဲ့ဂိမ်းကို ဆော့ကြပါတယ် …. အများဆုံး လူ(၈)ယောက်ဆော့လို့ရပါတယ် .. ဒီဂိမ်းမှာ မြေပုံနဲ့ လူမျိုးလဲရွေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာ Dark Age, Feudal Age, Castle Age နဲ့ Imperial Age ဆိုပြီးခေတ်လေးခေတ် ရှိပါတယ်။ လယ်စိုက်၊သစ်ခုတ်၊ အသားရှာ၊ ရွှေတူး၊ ကျောက်တူးနဲ့ စီးပွားရှာ …. ပြီးရင် လေးရုံ၊ ဓားရုံ ၊ မြင်းရုံ၊ သေနတ်ရုံ၊ အမြှောက်ရုံ စသဖြင့် ခေတ်အလိုက်၊ လူမျိုးအလိုက် ဆောက်ခွင့်ရတာတွေဆောက် ပြီးတော့ ပိုကောင်းအောင် Upgrade လုပ်ပြီးတော့ ရန်သူကိုသွားတိုက်ရပါတယ် ..
ကျွန်မတို့ကအဖွဲ့လိုက်တစ်မျိုး၊ ခေတ်အတက်ပြိုင်လို့တစ်ဖုံ (အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ခေတ်လေးခေတ်ကို ဘယ်သူအရင်ရောက်လဲပြိုင်တာမျိုးပါ)၊ ယောက်ျားလေး မိန်းခလေး တွဲလို့တစ်မျိုးနဲ့ အလုပ်မရှိချိန်တိုင်း အသေအလဲဆော့ခဲ့ကြတာပါ … တစ်နေ့တစ်နေ့ ချိန်းပွဲတွေဆိုတာ မနည်းမနောပါပဲ …. ယောက်ျားလေးတွေကတော့ လ္ဘက်ရည်တိုက်ကြေးပေါ့ …. သူတို့တွေက လေသေနတ်နဲ့လည်း စစ်တိုက်တတ်ကြပါသေးတယ် … ကျွန်မတို့တွေ ဒီဂိမ်းကိုဘယ်လောက်စွဲလမ်းသလဲဆိုရင် ထမင်းကို ၅ မိနစ်နဲ့အပြီးစားတတ်လာပါတယ် … ဘေးကတစ်ယောက်ယောက်က ဂိမ်းကိုဖွင့်တာမြင်လိုက်ရင်ကိုပဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပါတယ် .. ညအိပ်ရင်တောင် အိပ်မက်ထဲထည့်မက်တဲ့အထိပါ ….
ကျွန်မတို့ထိုင်ရတဲ့ပုံစံက အခန်းရှည်မှာ အလယ်လွတ်ထားပြီး နံရံဘက်ခြမ်းတွေကို မျက်နှာမူထိုင်ရပါတယ် … ကျွန်မတို့ကို အခန်းဝကနေရပ်ကြည့်တာနဲ့ မော်နီတာ အားလုံးကိုမြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင် ထိုင်ခိုင်းထားတာပါ …. ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးထိုင်တဲ့ပုံစံတွေရော၊ မော်နီတာတွေရောက အတွင်းဘက်ကိုအကုန်စောင်းနေကြပါတယ် …. (လူကြီးလာရင် မမြင်အောင်ပါ) တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်မြင်ပြီဟေ့ ဆိုရင် များသောအားဖြင့် Shut down ကိုယောင်မှားပြီးချပစ်လေ့ရှိကြတယ် …း) လူကြီးလာရင် စက်တွေအားလုံးက Restart လေးတွေဖြစ်လို့ပေါ့ …. နောက်ပိုင်း ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုနဲ့သုံးလိုက်တော့ စက်ကိုပိတ်ချစရာမလိုတော့ပါဘူး … အဆင်ပြေသွားပါတယ် …
ကျွန်မစဆော့ခါစက မကျွမ်းကျင်တော့ ဆရာကြီးတွေက ခေါ်မဆော့ကြပါဘူး … နောက်ပိုင်းကျွန်မကိုသင်ပေးတာက Orca ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းပါ …ကျွန်မ နည်းနည်းလက်ရည်တက်လာတော့ သူက ယုံလို့ သူများနဲ့ စိန်ခေါ်ဆော့ပြီး ရှုံးသွားတော့ ကျွန်မကို “နောက်တစ်ခါ နင်ပါရင် ငါဘယ်တော့မှ မပါတော့ဘူး” ရယ်လို့ စိတ်တိုတိုနဲ့လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးပြောဖူးပါတယ် …
နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိန်းခလေး(၃)ယောက်နဲ့ သူတစ်ယောက်တည်းချမယ်ပေါ့ စိမ်လာခေါ်တယ် … သူက Castle Age ထိရအောင်တက်မယ်။ Castle Age ရောက်တာနဲ့ ကျွန်မတို့အရှုံးပေါ့ …. တကယ်က သူကသိပ်တော်တဲ့ Gamer ပါ … သူက သူ့နာမည်ကို “ချီးကားကြီး” လို့နာမည်ပေးပါတယ် … သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်မတို့တွေ ချီးကားကြီးတိုက်လို့သေတယ်လို့နာမည်တွင်အောင်ပေါ့လေ….. ဟား ဟား …. အဲ့ဒီပွဲမှာ ချီးကားကြီးရှုံးသွားပါတယ် … ကျွန်မတို့တွေပျော်မှပျော်ပေါ့ …
နောက် မိန်းခလေးချင်းတိုက်ကြတဲ့ပွဲမှာ ယောက်ျားလေးတွေက ဘေးက၀င်ပြောရင်း ရန်မဖြစ်ယုံတမယ်လဲ ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ် … ကျွန်မတို့ ကုပ္မဏီက ၀န်ထမ်းများတဲ့အပြင် လူငယ်လူလွတ်တွေများတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ် … (လူကြီးနဲ့သိပ်အဆင်မပြေတာကလွဲရင်ပေါ့) … ခုတော့ ကျွန်မလည်း ဂိမ်းမဆော့တာ (၃)နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ …. သူငယ်ချင်းတွေလဲ အိမ်ထောင်ကျတဲ့သူကကျ … အဝေးရောက်တဲ့သူတွေကရောက်နဲ့ ကျွန်မတို့တွေ အရင်လိုလွတ်လပ်စွာ မဆော့နိုင်ကြတော့ပါဘူး …. အရင်အချိ်န်တွေကို လွမ်းလိုက်တာ ….
ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေ သုံးတဲ့နစ်ခ်တွေမှတ်မိသလောက်ပြန်ချရေးကြည့်ဦးမယ်နော် …
2. Desert Fox
9. Leo King
1. Player (ကျွန်မပါ)
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်မရဲ့ဂိမ်းဆော့ဖက်သူငယ်ချင်းများကို သတိရလို့ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်လေးပါ …
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:59 AM9comments Links to this post
ခပ်ဖွဖွ ထည့်သိမ်းထားပါရစေ ……
ငါတို့ရဲ့ အချစ်ပန်းပင်လေး ….
အမြစ်ကနေတော့ မနှုတ်လိုက်ပါနဲ့ …
ငါလေ…… နှမြောလွန်းလို့ပါ …..
ရေးချိန် - ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၀၈
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:39 PM3comments Links to this post